Nei Mutsara Wedzinza raJesu Wakanyorwa naMateu Wakasiyana Newakanyorwa naRuka?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wokuAustralia Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Nei nhoroondo yeupenyu hwaJesu achiri mudiki yakanyorwa naMateu yakasiyana neyakanyorwa naRuka?
Nhoroondo yaMateu yekuzvarwa uye kukura kwaJesu yakasiyana neyaRuka nekuti vanyori vacho vakanga vakaisa pfungwa pazvinhu zvakasiyana.
Nhoroondo yaMateu inonyanya kutaura zvakaitika kuna Josefa. Inorondedzera zvakaitwa naJosefa paakanzwa kuti Mariya akanga ava nepamuviri, kurota kwaakaita ngirozi ichimutsanangurira zvakanga zvaitika uye kubvuma kwaakaita zvaakanga audzwa. (Mat. 1:19-25) Mateu anoenderera mberi achitaura nezvekurota kwakaita Josefa ngirozi ichimuudza kuti atizire kuIjipiti, kutiza kwaakaita nemhuri yake, kurota kwaakaita ngirozi ichimuudza kuti adzokere kunyika yaIsraeri, kudzoka kwake uye kusarudza kwaakaita kugara kuNazareta nemhuri yake. (Mat. 2:13, 14, 19-23) Muzvitsauko zvekutanga zvebhuku raMateu, zita raJosefa rinotaurwa ka8 asi raMariya rinongotaurwa ka4 chete.
Asi nhoroondo yaRuka inonyanya kutaura zvakaitika kuna Mariya. Inotaura nezvekushanyirwa kwakaitwa Mariya nengirozi inonzi Gabrieri, kuenda kwakaita Mariya kunoona hama yake inonzi Erizabheti uye mashoko aMariya ekurumbidza Jehovha. (Ruka 1:26-56) Ruka anotaurawo nezvemashoko aSimiyoni kuna Mariya ane chekuita nekutambura kwaizoita Jesu. Kunyange paanotaura nezvekuenda kwemhuri yaMariya kutemberi Jesu paaiva nemakore 12, Ruka anotaura mashoko aMariya, kwete aJosefa. Ruka anowedzerawo kuti Mariya akachengeta zvinhu zvese izvi mumwoyo make. (Ruka 2:19, 34, 35, 48, 51) Muzvitsauko zviviri zvekutanga zvebhuku raRuka, zita raMariya rinotaurwa ka12, asi rekuti Josefa rinongotaurwa katatu chete. Saka Mateu anorondedzera zvakawanda zvaifungwa naJosefa uye zvaakaita, asi Ruka anotaura zvaifungwa naMariya uye zvakaitika kwaari.
Saizvozvowo, mitsara yemadzinza inotaurwa nevanyori vaviri ava yakasiyana. Mateu anotaura mutsara wedzinza raJosefa uye anoratidza kuti sezvo Jesu aiva mwanakomana waJosefa wekurera, aiva mugari wenhaka wepamutemo weumambo hwaDhavhidhi. Nei tichidaro? Sezvo aiva muzukuru waSoromoni mwanakomana waDhavhidhi, Josefa aiva wedzinza raDhavhidhi. (Mat. 1:6, 16) Zvisinei, Ruka anotaura mutsara wedzinza raMariya uye anoratidza kuti Jesu aiva mugari wenhaka chaiye weumambo hwaDhavhidhi “panyama.” (VaR. 1:3) Nei tichidaro? Sezvo aiva muzukuru waNatani mwanakomana waDhavhidhi, Mariya aiva wedzinza raMambo Dhavhidhi. (Ruka 3:31) Asi nei Ruka asina kuisa zita raMariya mumutsara wedzinza waakanyora kuti aratidze kuti Mariya aiva mwanasikana waHirai? Nekuti mumitsara yedzinza maiwanzoiswa mazita evarume chete. Saka Ruka paakanyora zita raJosefa achiti aiva mwanakomana waHirai, vanhu vainzwisisa kuti izvi zvaireva kuti Josefa aiva mukwasha waHirai.—Ruka 3:23.
Mitsara yemadzinza yakanyorwa naMateu naRuka inoratidza zvakajeka kuti Jesu ndiye Mesiya akafanotaurwa. Mutsara wedzinza raJesu wainyatsozivikanwa zvekuti kunyange vaFarisi nevaSadhusi vaisakwanisa kuupikisa. Mazuva ano mitsara yemadzinza yakanyorwa naMateu naRuka inokosha pakusimbisa kutenda kwedu uye pakuita kuti tive nechivimbo chekuti zvese zvakavimbiswa naMwari zvichazadziswa.
Waizviziva Here?—Nharireyomurindi Nhamba 3 2016